Ishidi Lekhabhoni Engagadiwe China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ishidi Lekhabhoni Engagadiwe - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Ishidi Lekhabhoni Engagadiwe)
I-Carbon Fiber Sheet Laser Cutting
I-Carbon Fiber Sheet Laser Cutting Mayelana nesakhiwo samashidi we-carbon fiber amashidi okusetshenziswa kwezimoto ukusika insiza 2mm, kungenziwa kube yi-carbon fiber ecwengekile noma ingilazi ye-fiber fiber enezindawo ezinekhabhoni fiber, ukuqina kusukela ku-0mmmm kuye ku-50mm, ubukhulu nosayizi oyenziwe...
Ishidi le-Carbon Fibre Ye-Carbon Fibre Wallets
Ishidi le-Carbon Fibre Ye-Carbon Fibre Wallets Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla amancane komoya...
Math uqeda ishidi le-3k cfrp le-drone
I-100% matt iqeda ishidi le-3k cfrp le-drone Imishini ye-CNC inezinzuzo ezilandelayo: Ikhwalithi yemishini izinzile, ukucaciswa kwemishini kusezingeni eliphakeme, futhi ukuphindaphinda okunembile kuphezulu, okulungele izidingo zokwenza indiza. I-CNC carbon fiber eyenziwe ngokwezifiso yokusika kungenzeka ukucubungula...
I-Custom High Strength 3k Carbon Fiber Plate / Ishidi
I-Custom High Strength 3k Carbon Fiber Plate / Ishidi Ngezansi kunezinzuzo zemishini ye- CNC: (1) Inani elikhulu lokunciphiswa kwenombolo yokufakwa kwamathuluzi, futhi izingxenye eziyinkimbinkimbi zezingxenye azidingi ukusetjenziswa okuyinkimbinkimbi. Uma sifuna ukushintsha ukwakheka nosayizi wezingxenye, kuyadingeka...
Ishidi le-fiber ye-Carbon yamapaneli esikejana sesikebhe
Ishidi le-fiber ye-Carbon yamapaneli esikejana sesikebhe Ngezansi kunezinzuzo zemishini ye- CNC: (1) Inani elikhulu lokunciphiswa kwenombolo yokufakwa kwamathuluzi, futhi izingxenye eziyinkimbinkimbi zezingxenye azidingi ukutholwa kanzima. Uma sifuna ukushintsha ukwakheka nosayizi wezingxenye, kuyadingeka kuphela...
Ishidi le-Carbon fiber elithengiswa eduze kwami
Ishidi le-Carbon fiber elithengiswa eduze kwami Ngezansi kunezinzuzo zemishini ye- CNC: (1) Inani elikhulu lokunciphiswa kwenombolo yokufakwa kwamathuluzi, futhi izingxenye eziyinkimbinkimbi zezingxenye azidingi ukusetjenziswa okuyinkimbinkimbi. Uma sifuna ukushintsha ukwakheka nosayizi wezingxenye, kuyadingeka...
Yenza ngokwezifiso ishidi le-fiber fiber ekhanyayo
I-Hobbycarbon Yenza ngokwezifiso ishidi le-fiber fiber ekhanyayo ye-fiber IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza...
ishidi le-carbon fiber elingadalwanga lelenziwe nge-carbon fiber sheet
Hobbycarbon carbon fiber unidirectional okwenziwe nge-carbon fiber sheet IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza...
Khipha ishidi le-matte carbon fiber sheet lezimoto zomjaho
IHobbycarbon Twill matte carbon fiber sheet ngezimoto zomjaho IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende...
Ishidi eliphezulu elingasindi 3k i-carbon fiber sheet
Hobbycarbon High solidweight 3k i-carbon fiber sheet ephelele IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende...
Ishidi lamaphebula e-3k 5mm e-carbon fiber ephelele
Ishadi lephepha le-Hobbycarbon 3k 5mm eliphelele le-carbon fiber plates IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza...
Ishidi le-3K plain matte 8mm Carbon Fibre
Ishadi le-Hobbycarbon 3K plain matte 8mm Carbon Fibre sheet IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende...
Ishidi lebhodi lebhodi ye-OEM kaboni fiber Iyathengiswa
Ishadi lebhodi le- Hobbycarbon OEM carbon fiber sheet for sale IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende...
Ishidi le-Carbon Fibre le-100% C
Ishidi le-Carbon Fibre le-100% C Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla amancane komoya we-carbon fibre...
ishidi le-CNC yokusika ishidi elenziwe ngokwezifiso
ishidi le-CNC yokusika ishidi elenziwe ngokwezifiso Lokhu ukusika kweCarbon Fibre CNC , I-3K Woven Carbon fiber Sheet ye-Multi-rotors ithandwa kakhulu ezintweni zokwenziwa nge-carbon fiber. Kokubili ukwakhiwa kwe-0/90 degree kanye ne-0/45 / -45 / 90 (Quasi-isotropic) kuyatholakala. Ngenxa yesisindo esikhanyayo, i- 3K...
Ishidi lokuhlobisa i-0.3x250x400
Ishidi lokuhlobisa i-0.3x250x400 Amandla obuchwepheshe aqinile, anemishini ekhokhelwayo yobuchwepheshe kanye nobuchwepheshe bokukhiqiza, imikhiqizo yayo yilezi: i-carbon fiber, indwangu i-aramid, indwangu exubile. Izinhlobo ezahlukene zamamodeli, ukwakheka kwendwangu, ubukhulu, isisindo namanye amapharamitha, ngokuya...
Ishidi lendwangu yedijithali ye-Modulus carbon fiber
Ishidi lendwangu yedijithali ye-Modulus carbon fiber Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla amancane...
Ishidi le-Carbon Fibre eyenziwe nge-matte Surface
3K twill matte 5.0mm ukushuba kweCarbon Fibre sheet nge matte Surface Ukuqina kwepuleti cishe ngo-5.0mm. Ipuleti lenziwa nge-T300 / T700 high epoxy resin. Kukhanya futhi kuzinzile, amapuleti e-CF ajwayele ukukhethwa ngamakhasimende ukuthi athathe amanye. (G10 Glass Fiber Sheet.Carbon Glass Sheet). Incazelo Yomkhiqizo:...
I-CNC eyenziwe ngokwezifiso ishidi lamakhabhoni e-3K e-carbon fiber
I-Hobbycarbon CNC ishadi lamashidi we-3K we-carbon fiber lamured sheet IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza...
Ishidi eliphezulu elinemibala egcwele i-carbon fiber / sheet ye-kevlar
Hobbycarbon High izikhwepha ezinemibala egcwele yekhabhoni fiber / ishidi le-kevlar IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile...
Ishidi le-fiber 3K ethambile ye-matte pure carbon
I-Hobbycarbon ngokwezifiso 3K ithafa elicwengekile le-carbon fiber sheet IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza...
Ishidi le-fiber Carbon fiber elinamandla kakhulu le-"X"
Ishidi le-fiber Carbon fiber elinamandla kakhulu le-"X" Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla...
Ishidi lokushisa le-hard toray carbon fiber board sheet
Ishidi lokushisa le-hard toray carbon fiber board sheet Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla amancane...
I-Hobbycarbon M3 Anodized Aluminium Standoff ye-hexacopter
Imibala Hex Round 4 40 Standoff
I-20x30x500mm Octagon Carbon Fiber Tube yeMultipter
I-Hobbycarbon M3 Round aluminium spacer ye-FPV
I-Hobbycarbon M3 7075 Aluminium bolts yohlaka lwe-FPV
Insiza yeCarbon fiber OEM ye-Professional Carbon
Ishidi Lekhabhoni Engagadiwe Ishadi Lekhabhoni Elidumile Ishidi Lekhabhasi Elukiwe Ipuleti Yekhabhoni Engagadiwe ye-Rc Amashidi Ekhabhoni Akheniwe Iphayiphu Yekhabhoni Ehlanganisiwe Ishidi Le-Carbon Fibre Elilukiwe Ishidi Le-Fibbon Elicwengekile